हराएका ब्रह्माजी प्रहरीको आँगनमा ! – MEDIA DARPAN
हराएका ब्रह्माजी प्रहरीको आँगनमा !
‘कुनै संग्रहालय, पुरातत्त्व विभाग र प्राचीन स्मारक जनाउ दिने ठाउँमा यो पुरातात्त्विक चिजलाई राखिनुपर्ने हो तर त्यसो भएन । अहिले पनि गौशाला प्रहरीको कुनोमा ब्रह्माजी राखिएकै छ ।’
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ३० मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:४८
काठमाडौँ — लिच्छविकालीन प्रतिनिधि प्रस्तर मूर्तिहरूमध्येमा पर्ने ब्रह्माको एउटा मूर्ति २०३८ सालको मध्यसम्मै जयबागेश्वरी मन्दिर पर्तिरको खुला मन्दिरमा राखिएको थियो । एकाएक त्यो मूर्ति हराएपछि खैलाबैला मच्चियो, प्रहरी–प्रशासनले खोजबिन सुरु गर्‍यो । केही महिनापछि पशुपतिछेउको वाग्मती किनारमै बालुवा खनेर खाल्डोमा हालिएको अवस्थामा उक्त मूर्ति भेटियो । अब यो कहाँ राख्ने भन्ने बहस स्थानीयमाझ सुरु भयो । पुरानै ठाउँमा राख्ने हो भने फेरि चोरिने डर थियो । ‘त्यसपछि सुरक्षाका हेतुमा यो मूर्तिलाई गौशालाको प्रहरी चौकीमा राख्ने निधो भएको थियो,’ पशुपति क्षेत्रका विज्ञ गोविन्द टण्डनले भने, ‘कुनै संग्रहालय, पुरातत्त्व विभाग र प्राचीन स्मारक जनाउ दिने ठाउँमा यो पुरातात्त्विक चिजलाई राखिनुपर्ने हो तर त्यसो भएन । अहिले पनि गौशाला प्रहरीको कुनोमा ब्रह्माजी राखिएकै छ ।’
युद्धविरामको एक महिनापछि अर्मानिया अजरबैजानबीच पुनः झडप, चार सैनिक मारिए; ६ घाइते
‘अधिनायकवादी चरित्रले प्रदर्शन गर्न बाध्य’